Entsha olandelwayo Phantom zizofuna nge Lightning Network - Blockchain Izindaba
Abadali yezifiso usongo futhi GHOST Jonathan Sompolinski futhi Aviv kaSowari kuchazwe umthetho olandelwayo entsha idokhumenti eshicilelwe kuleli sonto. Iziphakamiso eziyisisekelo Phantom uthembisa isiqinisekiso onokwethenjelwa ukuthengiselana “nganoma isiphi-bandwidth inethiwekhi”, kuhlanganise izinkontileka smart. Ukuthuthukiswa entsha esekelwe isixazululo wangaphambilini kusuka umyalo ofanayo, usongo, okuyinto isuka bendabuko block isakhiwo bitcoin futhi isebenzisa uyakaleka ngaphezulu “iqondiswe acyclic block amagrafu” (blockDAG). Abacwaningi bachaza ubuchwepheshe njengoba “le nje okungaqondile we Satoshi chain, okuyinto kangcono uhlelo emabhuloki okusheshayo noma enkulu.”
Buka le vidiyo ku-YouTube
Ngokungafani izixazululo okungaxhunyiwe ku-intanethi ezifana Lightning Network, lapho ukuthenga olwenziwa kunethiwekhi isengezo, Phantom linikeza ikhambi iklayenti-based elikuvumela ukuba ushiye yonke idatha emibhalombiko phezu blockroom.
Ngokwe abalobi, isici esiyinhloko oluhlukanisa Phantom wukuthi okuwenza abe nokwenzeka ukuhleleka komugqa amabhlogo, okuyinto usongo akazange avumele. Kwalokhu, usebenzisa “algorithm abahahayo” emsamo blockDAG kanye ukuhlukanisa amabhlogo eyenziwe “ngokwethembeka” ISIZINDA kusukela “non-ubambisana” ISIZINDA ukuthi zehluke olandelwayo yezimayini. Njengoba Onjiniyela bhala, lo mehluko ivumela zonke “ISIZINDA ngokwethembeka” ngokwengeziwe ukuze kufinyelelwe esivumelwaneni. Ukuxazulula le nkinga ukuhleleka kuka komugqa ivumela Phantom ukuba uchushe ngisho ukubala, kuhlanganise izinkontileka smart.
Sompolinski noSohari ukuqaphela ukuthi ngenxa ukuhleleka kuka komugqa, Phantom umhlatshelo kuthengiselana isiqinisekiso izinga, okwakukhona ephakeme ngaphambili usongo protocol. Kodwa abacwaningi siyongena ukuxazulula le nkinga emsebenzini esizayo.
NGEMPELA Bitcoin Thanksgiving! R...
Thumela Previous:Blockchain ETF lokuqala laseCanada evunywe nabalawuli
Thumela Landelayo:Litecoin kuyinto